Nalalka Shiinaha ee iftiiminta dhulka hoostiisa, soosaarayaasha hoose iyo naqshadaha soo saaraha nalalka LED - Eurborn
Ku saabsan Xafiiskayaga
Ku saabsan Imtixaanka
Fiilooyinka aan biyuhu xirin
Laydhka gidaarka ML1021
Iftiinka barta 'PL021'
Iftiinka barta 'PL023'
Iftiinka barta 'PL026'
Iftiinka barta 'PL608'
Fiidiyow Lagu Rakibo Gudaha Nalka LED-ka
Tayo sare iyo heer sare.
Eurborn waa soosaaraha kaliya ee shiinaha u heellan cilmi baarista, horumarinta iyo soosaarida birta birta ah ee birta ah iyo iftiinka biyaha hoostooda. Si ka duwan alaab-qeybiyeyaasha kale ee sameeya noocyo badan oo laambado ah, waa inaan diiradda saarnaa jawiga adag ee caqabadda ku ah alaabteena awgeed. Alaabtayadu waa inay awoodaan inay qaataan shuruudahan oo ay si fiican u gutaan iyadoon loo eegin caqabadda. Marka waa inaan ku dadaalnaa dadaal kasta oo kasta iyo tallaabo kasta oo aan ku hubinno in wax soo saarkeennu ay ku qancin doonaan
Eurborn waxay leedahay shahaadooyin aqoon leh sida IP, CE, ROHS, patent muuqaalka iyo ISO, iwm.
Shahaadada IP: Ururka Caalamiga ah ee Ilaalinta Ilayska (IP) wuxuu u kala saaraa laambadaha iyadoo la raacayo nidaamkooda keydinta ee IP-ga ee loogu talagalay boodhka, arrimaha qalaad ee adag iyo soo gelitaanka biyaha. Tusaale ahaan, '' Eurborn 'waxay inta badan soo saartaa alaabada dibadda sida laydhka aasan & kuwa dhulka ku jira, nalalka biyaha hoostooda ku jira. Dhammaan nalalka birta birta ah ee dibadda ka sameysan waxay la kulmaan IP68, waxaana loo isticmaali karaa isticmaalka dhulka gudihiisa ama isticmaalka biyaha hoostooda. Shahaadada EU CE: Alaabtu ma hanjabayaan shuruudaha aasaasiga ah ee badbaadada aadanaha, xoolaha iyo badbaadada wax soo saarka. Mid kasta oo ka mid ah wax soo saarkayagu wuxuu leeyahay shahaadada CE. Shahaadada ROHS: Waa halbeeg qasab ah oo ay dejisay sharciga Midowga Yurub. Magaceeda oo buuxa waa "Amarka Xaddidaadda Isticmaalka Waxyaabaha Khatarta ah ee Qaar ka mid ah Qalabka korantada iyo korantada". Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu jaangooyo maaddada iyo heerarka geeddi-socodka ee alaabada korantada iyo korantada. Waxay ku habboon tahay caafimaadka aadanaha iyo ilaalinta deegaanka. Ujeedada heerkani waa in laga takhaluso rasaasta, meerkuriga, cadmium, chromium hexavalent, biphenyls polybrominated iyo polybrominated diphenyl ether ee alaabada korontada iyo elektaroonigga ah. Si aan si fiican u ilaalino xuquuqda iyo danaha waxsoosaarkayaga, waxaan haynaa shahaado noo gaar ah oo noo gaar ah oo u gaar ah alaabada caadiga ah. Shahaadada ISO: taxanaha ISO 9000 waa heerka ugu caansan heerarka badan ee caalamiga ah ee ay dejisay ISO (Ururka Caalamiga ah ee Jaangoynta). Heerkani maahan in lagu qiimeeyo tayada wax soo saarka, laakiin waa in lagu qiimeeyo xakamaynta tayada alaabta ee habka wax soo saarka. Waa halbeeg maarayn urureed.
Iftiinka jaranjarada oo keliya 12mm dhumucdiisuna -GL108
Nidaamyada maaraynta tayada-sare oo dhammaystiran oo saynis ah, tayo aad u fiican iyo aaminaad aad u fiican, waxaan ku guuleysannay sumcad wanaagsan. Isla mar ahaantaana, Eurborn wuxuu ku adkeysanayaa hal-abuurnimo isdaba-joog ah, wuxuuna soo bandhigayaa iftiinkan ka socda lambarada ugu khafiifsan xilligan ee Eurborn ...
Noocyada Nalalka Jaranjarada
1. Haddii aysan aheyn madadaalo, tiirarka nalka runti dhadhan maleh Daacad ahaanta, laambada jaranjarada waxay la mid tahay laydhka dariiqa. Waa nalkii ugu horreeyay taariikhda ee loo adeegsado sidii muuqaal muuqaal ah, maxaa yeelay jaranjarooyinka habeenkii waa inay lahaadaan laydhadh, o ...
Halkan Waxaad Nagala Soo Xiriiri Kartaa
Xafiiska iibka: Room 702, Zhe Jiang Dhismaha Ganacsiga, Maya 430 Dongguan Avenue, Degmada Nancheng, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong, Shiinaha
Fakis: 86 769 2302 2799
Fakis: +86 769 8523 2835
Email noo soo dir: info@eurborn.com